Jumlad Jikada Kariimka ah ee Hoostiisa Weel Aan Jirin
Bogga ugu weyn / Sinks jikada / Hoosada Hooska Hoos u Xir Maaliyad Bir ah oo aan Nadiifinaynin 32 Inch
Subagga Jikada Kariimka ah ee Jumladaha aan Caloosha Laheyn ee Weelku Dhexmaray 32 Inch
Ku raaxayso faa iidada dabaasha sare ee leh naqshadaha nadiifka ah ee casriga ah ee guriga ku yaal jikada kasta.
Si loogu daro ku-habboonaanta, dareeraha korantada ee dambiisha waxaa lagu daraa lacag la'aan iibsashada. rakibaadda fudud, dhammaan qalabka kor u kaca ayaa la bixiyaa. khibrad WOWOW tayo sare leh oo jikadaada u soo ka dhig mid ifaya si aad ugu noolaato.
Cabbirada weelka dibedda ku yaal: 32 ”lx 19” wx 10 ”d. cabirka min cabirka: 36 ”;
Qalabka bilaashka ah: Weelka wax lagu cuni karo oo bir badan oo shaqeynaya wuxuu difaacaa salka hoose, 3 gogo 'strainer setin, tuwaal kushiinka jikada ah, qalabka kor u kaca, nooca goynta - damaanada xadidan ee nolosha iyo adeegga macaamiisha oo adiga kaa dhigaya marka hore.
Saqaf kasta waxaa lagu daro lagudarsadaa qalabka difaaca si loo yareeyo dhawaaqa qoyaanka.
Dusha sare ee daciifka u haysa waxay ka sii ilaalisaa daxalka iyo sunta jirka iyadoo loo marayo geedi socod dhammaystiran oo qumman. weelkan labajibbaaran oo weelka lagu qurxiyo ayaa siiya cimri shaqeynaya.
ilkaha u adkaysta t304 steel bir ee tru16 dhabta 16-cabir (markasta 1.5mm qaro weyn) xaga awooda iyo cimri dhererka.